Igwe ọrụ ugbo nke oge a na-etinye ọmụmụ ala n'ihe egwu - akwụkwọ akụkọ "Sistemụ nduku"
в Akụkọ ụwa, Sayensị, Ihe omume, Omume / Etu, Injinia / Teknụzụ, Ọmụmụ
Igwe ọrụ ugbo nke oge a na-enwe mmetụta dị njọ na ọmụmụ ala ma na-ebute ọdachi ndị na-emere onwe ha. Nkwubi okwu a sitere n'aka otu ndị ọkà mmụta sayensị si Sweden, Switzerland na United States. bipụtara Ọrụ ya na akwụkwọ akụkọ Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).
Ọmụmụ ihe ahụ kwuru na ọ bụrụ na n'ọgwụgwụ 1950, ndị na-ewe ihe ubi na ọka ruru ihe dị ka tọn 4, mgbe ahụ, ndị nke oge a nwere ike ịtụ 36 tọn. Emebere ígwè ọrụ ugbo nke oge a iji kpuchido ala na-esighi ike: taya na-eme ka ọ dị nro na obosara, nke na-ebelata nrụgide ala.
Ma nke a na-azọpụta naanị elu oyi akwa nke ala. Ma n'ime ala dị omimi, a na-ejikọta ala nke ukwuu nke na a na-atụ egwu ọmụmụ ya. Mkpokọta dị ukwuu na-emetụtakwa ike ịfefe mmiri.
“Nke a pụrụ ịbụ otu n’ime ihe ndị kpatara mbelata nke ihe ọkụkụ na mmụba nke ọnụ ọgụgụ idei mmiri n’ụwa,” ka onye edemede ọmụmụ bụ́ Prọfesọ Thomas Keller nke Mahadum Sweden nke Sayensị Ọrụ Ugbo na Sweden kwuru.
Keller na ndị ọrụ ibe ha debere ala ndị kacha nọrọ n'ihe ize ndụ nke "mkpakọ ogologo oge" nke ala. Ebe kacha nwee nsogbu bụ Australia, Europe, North na South America. Ndị ọkà mmụta sayensị na-eme atụmatụ na otu ụzọ n’ụzọ ise nke ala a na-akọ n’ụwa emebiwo nke ukwuu nke na o nwechaghị ohere iweghachi ya. N'ụzọ dị nta, mkpịsị aka na-emetụta ala dị na Eshia na Africa, ebe ọkwa nhazi ọrụ ugbo adịghị elu.
Tags: teknụzụmkpirisi ala
Russia na-ekwurịta ịzụrụ poteto na Belarus
Gọọmentị German ga-akwụ ndị ọrụ ugbo otu ijeri euro